विचार Archives - Babal Khabar
Feb202022 by बबाल खबरNo Comments
आपके शरीर में पनपने वाली ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है नर्व ब्लॉकेज. जिसका इलाज अगर सही समय पर न किया जाए तो व्यक्ति गंभीर हृदय रोगों की चपेट में आ सकता है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे लेख में बताए जाने वाले उन तीन बेजोड़ उपायों को अपनाएं जो लाखों रुपये बचाएगा और आपको दर्द से राहत दिलाने के साथ साथ नर्व ब्लॉकेज की परेशानी से छुटकारा भी दिलाएंगे. एक्सरसाइज और योग हर किसी के लिए फायदेमंद होता है. योग शरीर को बीमारियों से बचाता है, साथ ही शरीर में नई ताज़गी भी लेकर आता है. एक्सरसाइज और योग करने से शरीर अच्छे से काम करता है. क्योंकि यह शरीर के अंगों को खोलता है और खून का प्रभाव सही रखता है. योग में कई आसन हैं जो नसों की ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे कि भुजंगासन, ये आसन शरीर से थकावट दूर करने के साथ मोटापा भी घटाता है. इस आसन से शरीर में खून का प्रभाव सही रह...
Jan192022 by बबाल खबरNo Comments
भिडियो हेर्नुस, काठमाण्डाै – मौसम परिवर्तनको समय शुरु भएसँगै धेरै मानिसहरुमा मौसमी रुघाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ । यस सँगै कोरोनको पछिल्लो भेरिएण्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आम मानिसले आफूलाई भएको संक्रमण मौसमी रुघाखोकी हो की कोभिड संक्रमण छुट्ट्याउन सकिरहेका छैनन् । यसले अस्पतालमा दैनिक रुपमा रुघाखोकीका बिरामीको चाप बढिरहेको छ । अल्का अस्पताका चिकित्सक डा रक्षा गौतम आफूमा काेराेनाकाे जस्ताे लक्षण देखिएमा पीसीआरु परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ओमिक्राेनलाई सामान्य रुपमा हेर्न नहुने उहाँकाे भनाइ छ । यही विषयमा डा. रक्षा गौतमसँग गरिएकाे कुराकानी : अहिले अस्पतालहरुमा मौसमी रुघाखोकीको बिरामीकाे चाप कस्तो छ ? मौसमी परिवर्तनले हुने रुघाखोकीका लक्षण भएका बिरामीहरुको चाप धेरै बढेको छ । गएकाे दुईहप्ता देखि हाम्रो ओपीडीमा बिरामीको चाप तीन, चार गुणाले बढे...
Jan152022 by बबाल खबरNo Comments
भिडियो हेर्नुस, ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनामा देखेका कुराहरुको अर्थ हुने बताउछन् । किनभने प्रत्येक मानिसहरुले सपना देख्छन्। धेरैले विर्सन्छन् भने कमैले मात्र विहान सुनाउने गर्दछन्।तर आफुले देखेका केही यस्ता सपनाहरु सुनाउन नहुने ज्योतिषीहरुले बताएका छन्। किनभने आफुले देखेका केही यस्ता सपनाहरुले जीवनमा सफलता हासिल गर्ने सपनाहरु हुन्छन्। जसले तपाईको जीवनमा पुरै परवर्तन गरिदिनुका साथै धन, सुख र शान्ति ल्याउँछन्। यदि तपाईले यी तल दिएका ५ चिजहरु सपना देखेर कसैलाई भन्नुभयो भने फल प्राप्त हुँदैन्। के-के हुन् ती सपना ?यदि तपाईले आफैलाई मृत अवस्थामा सपनामा देखेका कसैलाई नसुनाउनुहोस्। किनभने यो तपाईको लागी शुभ हो।यदि सपनामा कतै हरा भराभरा बगैचा र रुखभरी फल देखेमा पनि शुभ हो । यो पनि कसैलाई नसुनाउनुहोस् सपनीमा सानो माछा खाएको देख्नुभयो भने पनि भुलेर पनि कसैलाई नभन्नुस । किनभने मा...
एकै गाउँका ६ जनाको मृत्युपछि शोकमा डुब्यो बन्दिपुर गाउँ
पुरा खबर, तनहुँ – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–६ धरमपानीस्थित बाक्सेमा शुक्रबार राति भएको जीप दुर्घट नाले गाउँ शो कमा डु बेको छ । साराङघाटबाट धरमपानी भित्री सडकखण्डमा बाक्सेतर्फबाट धरमपानी जाँदै गरेको ग१ज ६५५५ नम्बरको जीप दु र्घटनामा छ जनाको मृ त्यु भएपछि बन्दीपुर शो कमा डु बेको हो । माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अघिल्लो दिन भएको दु र्घटनाले सबैलाई दु खित तुल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले बताउनुभयो । ‘चाडपर्वका बेला भएको दुर्घटनाले बाक्से, हटिया मात्र नभई सिङ्गो पालिका शोकमा डुबेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष थापाका अनुसार आँबुखैरेनीको घुमाउनेबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै बन्दीपुरतर्फ गुडेको जीप हटिया गाउँ आइपुग्नुभन्दा केही नजिक उकालोबाट व्या क भएर ख सेको थियो । जीपको स्टार्ट बन्द भएर पुनःस्टार्ट गर्न खोज्दा पछाडि हटेपछि जीप दुर्घ टना भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘चालक सिकारु...
Jan112022 by बबाल खबरNo Comments
क्याप्सुलमा किन हुन्छ दुईथरीको रंग ?
भिडियो हेर्नुस, क्याप्सुलमा किन हुन्छ दुईथरीको रंग ? जान्नुस एजेन्सी | हामी सबैले जीवनमा धेरैचोटि औषधि सेवन गरेका छौं । ट्याब्लेटका अलावा हामीले क्याप्सुल पनि खाएका हुन सक्छौं ।क्याप्सुलको रंग दुईथरी हुन्छ तर धेरैजनाले यसमा ध्यान दिँदैनन् । किन यसो हुन्छ त ? खासमा क्याप्सुल दुई भागमा विधाजित हुन्छ जसमा एक भाग ठूलो र एक भाग सानो हुन्छ ।ठूलो भाग क्याप्सुलको कन्टेनर हो भने सानो भाग चाहिँ क्याप हो । क्याप्सुलमा औषधि भर्दा कन्टेनर भागलाई मशिनमा हालिन्छ अनि त्यसलाई छोप्ने क्याप पनि मशिनले नै फिक्स गर्छ ।यस काममा गडबडी नहोस् भन्नका लागि क्याप्सुललाई दुई रंगमा विभाजित गरिन्छ । बच्चाहरूले औषधि खान मान्दैनन् त्यसैले उनीहरूलाई फकाउनका लागि रंगीबिरंगी क्याप्सुल बनाइएको हो भन्ने पनि एकथरीको मत छ । अनि फरक फरक औषधिलाई विभाजित गर्नका लागि फरक फरक रंग बनाइन्छ । कुन औषधि कति हालियो थाहा पाउन...
भिडियो हेर्नुस, करुणा जी, नमस्कार ।ठूलो सम’स्यामा छु । कहिलेकाहीं दि’क्कलाग्छ र मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्छन् । विवाहपश्चात जीवन सुन्दर हुन्छजस्तो लाग्थ्यो तर संसारको सवैभन्दा दुःखी व्यक्ति हुँ भन्ने अभास भैरहेको छ । म ४० वर्षीय जागीरे व्यक्ति हुँ । स्थायी जागिर भएपछि मात्रै विवाह गर्छु भन्ने अ’डानका कारण मैले ३६ वर्षको उमेरमा २२ वर्षकी युवतीसँग विवाह गरें । कम उमेरकी केटी विवाह गर्नुको उद्देश्य पनि उनलाई पढाएर जागीर खुवाउने नै हो । उनी मलाई बुढो भइसक्नु भयो भनेर गा’ली ग’र्छिन् भने तिम्रो केटाकेटीपन कहिलै गएन भनेर रिसा’उँछु । दुईको उद्देश्य नमिल्दा हाम्रो यौ’ स’म्पर्क कम हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो छोराछोरी पनि भएको छैन । विवाह गरेको केही वर्षपछि मैले थाहा पाएँ, जीवनमा जागीर, पैसा, प्रसिद्धि ठूलो कुरा होइनरहेछ । मुख्य कुरा त श्रीमतीसँग व्यवस्थिति रुपमा जीवन चलाउनु नै रहेछ । ...
Jan62022 by बबाल खबरNo Comments
सायद मेरो भाग्यमा कुनै पु’रुषको प्रेम छैन !
भिडियो हेर्नुस, हरेक व्यक्तिले आफ्नो सुखी वै’वाहिक जीवनको कल्पना गर्ने गर्छन् । विवाह अघि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि उनीहरुको स’म्बन्ध कति दिन, कति महिना वा कति वर्षसम्म चल्दैछ । दुई व्यक्ति जब सँगै हुन्छन् तब उनीहरुले आफ्नो जीवन रथलाई सही तरिकाले चलाउने कोसिस गर्ने गर्छन् । तर रथ जहिले पनि सन्तुलित तरिकाले चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । सुरुवातमा जो पार्टनर राम्रो लाग्छ उसँग समस्याको सिलसिला त्यतिबेला सुरु हुन थाल्छ जब गृहस्थ जीवनका जिम्मेवारीले आफ्नो खुट्टा पसार्न थाल्छ । त्यतिबेला मानिसहरुलाई लाग्छ कि उनीहरु विवाहित जीवनका लागि बनेका होइनन् आफ्नो स’म्बन्धविच्छेदबारे कुरा गर्दै मनिषाले भनेकी थिइन् मेरो वि’वाहको विषयमा भिन्न विचार थियो । म विवाह गर्न चाहन्थेँ र विवाहित जीवनमा रहँदा मलाई थाहा भयो कि म यसका लागि बनेकी होइन । यदि तपाईं एक खराब सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने तपाईं अलग्गिन...
Jan42022 by बबाल खबरNo Comments
मृत्युदण्ड कुरिरहेकी आमालाई साउदीको जेलमा भेट्दा
(काठमाडौं) – ‘तपाईंको आमासँग मिल्ने नाम भएकी एक महिला साउदीको जेलमा हुनुहुन्छ । तपाईंको आमा हो कि अरू नै, एक पटक आएर भेट्नुपर्‍यो ∕’ नवलपरासीका सुनील गुरुङलाई साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव भरत खनालले २०७५ फागुनको एक दिन फोनमा भने । सुनील साउदी अरबको प्रमुख औद्योगिक सहर दमाममा काम गरिरहेका थिए । उनी डेढ वर्षअघि मात्रै त्यहाँ पुगेका थिए । ‘मेरी आमाको शव म आफैंले अन्तिम संस्कार गरिसकेको छु । काजकिरिया पनि भइसकेको छ,’ आश्चर्य मान्दै उनले खनालसमक्ष भने, ‘नाम मिल्दैमा मेरो आमा हुन सक्ला र ? तैपनि म भेट्न आउँछु ।’ सुनीलले २०६९ वैशाखमा पशुपति आर्यघाटमा आमा सरस्वतीलाई दागबत्ती दिएका थिए । घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरब पुगेको ७ महिनामै सरस्वतीको शव आएको थियो । सुनील र सुनीलकी दिदी सुशीलालाई आमा साउदी पुगेको थाहा थिएन । बुबाको मृत्यु भएपछि सम्पर्कविहीन भएकी उनी साउदी पुगेको म...
संम्ब”न्ध वि”च्छे”द गरिसकेका पू’र्व पतिसंग फेरी माया बस्यो, सम्ब”न्ध पनि भयो, अब के हुन्छ ? अब म के गरौं ?
भिडियो हेर्नुस, म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरो विवाह १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला मेरा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो। माया(प्रेम के हो थाहा थिएन। बहकाउमा आएर गाउँकै विवाहित पुरुषसँग हेलमेल भयो र माया(प्रीति बस्यो। उनीसँग शा’री’रि स’म्ब’न्ध राखेपछि मलाई गलत गरें भन्ने लाग्यो अनि त्यो घरमा बस्नु उचित लागेन। मैले आफ्नो घर छाडें र सम्बन्ध-विच्छे”द गरे।जोसँग सम्पर्क भयो, उनी विवाहित भएकाले उनको घर जानु पनि उपयुक्त लागेन। माइती जाने प्रश्न नै भएन। मैले यी सबै बेहोरा अवगत गराएर श्रीमानलाई पत्र लेखें र यथार्थ कुरा बताएँ। अहिले म काठमाडौंमा तरकारी बेचेर जीविका चलाउँदैछु।केही समययता मेरा श्रीमान काठमाडौंमै व्यापार गरेर बसेका छन्। बेला(बेलामा उनको र मेरो भेट हुन्छ। उनले गाउँमा दोस्रो विवाह गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनी मसँग असल व्यवहार गर्छन्, दुःख(सुख सोध्छन् र विवाह...
Dec302021 by बबाल खबरNo Comments
साबधान ! कतै तपाई प्लास्टिकको चामल किनिरहनु भएको त छैन ? यसरी सजिलै चिन्नुहोस् प्लास्टिकको चामल
भिडियो हेर्नुस, प्लाष्टिकको चामलका बारेमा सामाजिक सञ्जाल, समाचार र अन्यत्रबाट सुन्नु, देख्नु भएको होला । प्लाष्टिकको चामल कतै आफैले किनिएको त छैन भनेर डर पनि लाग्ला । यस्तोमा प्लाष्टिकको चामल र सक्कली चामल कसरी छुट्याउने त ? सक्कली र नक्कली चामल उस्तै देखिन्छ । तर नक्कली चामल अर्थात प्लाष्टिकको चामल स्वास्थ्यकालागि निकै हानिकारक हुन्छ । प्लाष्टिकमा फ्याथालेट्स रसायन हुन्छ जसले हर्मोनमा असर पुर्याउने गर्दछ र प्रजनन प्रणालीमा असर पार्दछ । यसका साथै पेटको विभिन्न समस्या निम्त्याउने गर्दछ । तसर्थ प्लाष्टिकको चामल यसरी छुट्याउनु होस् । १. थोरै चामल लिने र त्यसमा सलाईको काँटीले आगो लगाउने । यदि त्यसबाट प्लाष्टिक जलेको बास्ना आयो भने त्यो प्लाष्टिकको चामल हुनसक्छ । २. एउटा चम्चामा तेललाई तातो बनाउने र त्यसमा चामल हाल्ने । प्लाष्टिकको चामल भए त्यो पग्लन सुरु गर्छ । सक्कली भरे चामल त...